Langosh - uzommeputa
Nri Nri nke ụwa
Langos (langos, Hungarian, literally "fiery") - ihe a na-ejikarị eme ihe dị iche iche, ezumike na mbara igwe, n'oge ememme na ememe ndị mmadụ. Achịcha ahụ na-ewu ewu na Hungary, Austria, Czech Republic, Slovakia, Serbia na Romania. Ntụziaka maka nri langos dị mfe, dị ka niile ingenious - ọ bụ achicha mere si yist mgwakota agwa , e ghere eghe na mmanụ na mmanụ.
Ọtụtụ mgbe ejiri galik na garlic na / ma ọ bụ cheese, ude mmiri. E nwere nsụgharị abụọ bụ isi nke Langosh. Dị ka otu onye n'ime ha si kwuo, ndị Hungary na-esi na omenala ndị na-emepụta ihe oriri na-edozi ahụ. Dị ka nsụgharị ọzọ si kwuo, akụkọ ihe mere eme nke na-esi nri dị ka ụda mmiri na-alaghachi n'oge ochie nke oge Rom.
Mgbe ụfọdụ, m na-achọ ime nri dị mfe, ngwa ngwa, ma ọ bụghị nri nkịtị, ya mere, Hungary langosh - naanị nhọrọ ziri ezi maka ikpe dị otú ahụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị, dịka ọmụmaatụ, na mba ahụ ma ị nwere ike itinye okpokoro n'èzí, n'okpuru ebe mkpuchi, na veranda ma ọ bụ na mbara ihu.
Esi esi esi nri anu?
ọka wheat - banyere 500 g;
mmiri dị oyi - banyere 300 ml;
yist - 15 g ọhụrụ ma ọ bụ 5-6 g akọrọ;
Anyị na-amalite mgwakota agwa site na ntụ ọka a na-achọta site n'usoro na-enweghị isi.
Anyị ga-atụle ihe ndị ahụ. 2 tablespoons nke ntụ ọka weere na shuga na yist na-etisasị na obere mmiri ọkụ (iko, okpomọkụ banyere 30 degrees C). Tinye akpa ahụ na ebe dị ọkụ maka ihe dịka minit 20. Anyị na-awụsa ite ahụ n'ime nnukwu efere ma na-ese ntụ ọka. Anyị tinye ntụtụ nke nnu. Anyị na-agwakọta mgwakota agwa ahụ.
Anyị na-atụgharị ya na ngwakọta, tinye ya na nnukwu efere, kpuchie ya na akwa dị ọcha ma mee ka ọ nọrọ n'ebe dị ọkụ maka ihe dị ka nkeji 20, mgbe nke ahụ gasịrị, anyị gwakọta ma kpalie. Ịnwere ike ikwughari oge ọzọ, ma ọ dịghị mkpa. Anyị na-ekewa mgwakota agwa ahụ na mpempe akwụkwọ, ma na-atụgharị ha na ntụtụ na-agbagharị na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ na anyị na-eme achịcha na aka anyị.
Ntuzi tortilla na-agbanye n'ọtụtụ mmanụ ka ọ bụrụ ọla edo mara mma ma gbasaa na akwa akwa iji gụọ iko ahụ. Achịcha gwụrụ na garlic ma ọ bụ smeared na ahịhịa garlic ihendori. Kwadebe ya dị ka ndị a: gbanye galik garlic na ose na-acha uhie uhie na ngwa agha na ncha nke nnu, tinye obere mmanụ ma ọ bụ mmiri. Na-eje ozi na chiiz, ude mmiri na herbs.
N'ezie, ọ dị mma ijere nri ndị ọzọ kwesịrị ekwesị (na-eji aka ha edozi Hungarian, Romanian, Austrian, Slovak, Czech ma ọ bụ Serbian) na otu iko mmanya dị mma, mkpụrụ osisi palinka ma ọ bụ mkpụrụ osisi.
Spaghetti na ọkụkọ na creamy ihendori
Salad kabeeji Korea
Na-apụta nke cheese cheese
Aioli ihendori: uzommeputa
Azụ na Grik
Ntụziaka Satsivi maka ọkụkọ
Schnitzel mere nke anụ a mịrị amị
Mosaị Beijing - uzommeputa
Chicken na Chinese na ihe ụtọ na utoojoo ihendori
Churchchel - uzommeputa
Brizol - Ntụziaka maka nri na-atọ ụtọ na obi obi nke àkwá
Na-etinye aka na ugu - uzommeputa
Shirt na Czech - uzommeputa
Mkpịsị ọla edo
Ndụmọdụ nke ọkà n'akparamàgwà mmadụ banyere ịrara di ya nye
Esi esi enweta mmiri maka ụmụaka?
Lee ihe ijuanya: ndị mmadụ na-atụgharị uche ma na-akwa ụta nke ukwuu!
Olee otú ejiji maka olili ozu n'oge okpomọkụ?
Achịcha "Beer mmanya"
Ihe nke hummingbird pụtara
Gịnị kpatara nrọ nke inwe mmekọahụ na nwoke?
Ekeji na-acha akpụkpọ anụ
Kedu ihe ha na-eme megide Atọ n'Ime Otu?
Uwe maka Zara 2013
Gwọọ ọrịa hemorrhagic ọrịa rabbits
Na-enwe nsogbu na ime afọ
Ụdị uwe ogologo
Coccidiosis na rabbits - ụzọ dị irè nke ọgwụgwọ na mgbochi
Kedu ka esi ewere chenitine na-esi ísì ụtọ?
Ejiji ụlọ na ogidi ndị a chọrọ mma
Nicole Kidman na Keith Urban mere ememme ncheta ọmụmụ nke onye na-egwu egwú
Akpụkpọ ụkwụ Orthopedic maka ụmụ nwere nkwarụ valgos
Kedu otu esi ewere tomato?
Mkparịta ụka nke agbamakwụkwọ nzuzo nke Jennifer Aniston na Justin Teru - na-aga n'ihu!
Kedu otu esi enweta ụbụrụ site pasent 100?
Mmiri ozuzo maka ụmụ nwanyị dị ime